ပန်ဒိုရာ: သံလွင်အိပ်မက် မဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၃) အမှတ် (၃)
Posted by pandora at 3:08 AM
မပန် နိမိတ်ပုံတွေ သုံးတာထိရောက်တယ်။ ကဗျာဆရာမ ဖြစ်လို့ ထင်တယ်။
ပန်ပန့်လက်ရာ လွမ်းနေတာ ... မြိုင်တို့အကြောင်း တ၀ကြီး ဖတ်ပြီး အလွမ်းပြေသွားတယ်။
ခိုင့်အတွေးကို ရေးထားပေမဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို မြိုင်တို့အကြောင်း လို့ တပ်ထားတာလဲ ပန်ပန့်ရဲ့ technique တခုပဲလား ... စဉ်းစားနေမိတယ်။
ကစားလုံးများကိုတော့ နောက်မှ အေးဆေးဖတ်ရမယ်။ အခုအိပ်ရတော့မှာမို့။
အမြည်းလေးတွေ့ရုံနဲ့တင် ခိုင် မြိုင် တို့အကြောင်းကို ဖတ်ချင်နေပီ....
တကယ်ကောင်းတဲ့ဝတ္ထုလေးပါ... ကောင်လေးကောင်မလေးသူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ... ဖြစ်တတ်တာလေးတွေကို လှလှပပ ဖော်ကျူးထားတာကို သဘောတကျဖတ်သွားပါတယ်...
ကဗျာရော ၀တ္ထုပါ လာဖတ်သွားပါတယ်။
ကဗျာဖတ်ရင်း လှိမ့်ချပေးခဲ့ပါတယ် ဆိုတဲ့နေရာအရောက်မှာ အမျိုးသမီးတွေကို အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအလိုက် ဘောလုံး၊ ဘတ်စကက်ဘော၊ ဂေါက်သီး၊ တင်းနစ်ဘောလုံး တို့နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့ ဟာသကို ပြေးသတိရမိလို့ ပြုံးရသေးတယ်။း-)
ဆရာမရေ...ဖြစ်လာတဲ့ရင်ဘတ်ထဲကအရိပ်တွေ ပုံဆောင်ခဲအဖြစ် စကားလုံးတွေနဲ့ ဝေမျှချင်ပါတယ်၊
ခက်တာက ကျနော်စိတ်လိုလက်ရ ရေးမယ်ပြင်တိုင်း....တစ်ခါက မော်ဒန်ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို မော်ဒန်လို
တွေးပြီးမျှဝေမိလို့ အသားလွတ်ရန်လိုခံလိုက်ရတော့ ဒီရသဇတ်လမ်းလေးကိုလဲ ရသလိုခံစားရမှာ မဝံ့မရဲဖြစ်နေတယ်၊ အချိန်ပေးပြီးဖတ်ရတဲ့ မျက်လုံးတွေအတွက် အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေချင်လို့ ဒီမျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာ အခြေအတင်မရေးတော့တာပါ၊ တစ်ဖက်လူလဲ စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့၊
"အသံမဲ့တေးတစ်ပုဒ်" ကို မြိုင် နဲ့ ခိုင် က ဖေါက်ထွက်ပြီး ကျနော်ဆီရောက်မလာကျဘူး။
ကစားလုံးများ ကတော့..ကိုပေါ ပြောသလို..အဲဒီ ဟာသလေးပဲ မြင်ယောင်မိသွားတယ်။း)
၀တ္တု ဇတ်ကောင်တွေကိုတော့.. မြင်ရ..သိရ ခံစားနေရပါတယ်။ စရိုက်တခုချင်း သရုပ်ဖော်ထားပေမဲ့.. မြိုင် နဲ့ ခိုင်ကတော့.. သူတို့ ကိုယ်ပိုင် စရိုက်တွေ အတိုင်း ဖြစ်မလာဘူးပေါ့လေ။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်..ပန်ဒိုရာ ရဲ့ ဟန်..သဘာဝ ကျကျ ခံစားလို့ကောင်းတဲ့ ၀တ္တုလေးတပုဒ်ပါ။
( တခုပဲ.. ဇတ်လိုက်ကောင်မလေးတွေက..အမြဲ..ဆံပင်ပျော့ပျော့ခွေခွေ လေးတွေ ဖြစ်နေတာတော့..တယ် မသင်္ကာ ချင်ဘူး..)း)))
အတွေးနဲ့ပေးထားတဲ့ နမိတ်ပုံကတော့ ပြောစရာမလို...။ကောင်းပြီးသား..။
ရေးထားတာ သိပ်လှပါတယ် ပန်ပန်ရေ..
ကောင်းလိုက်တဲ့ ၀တ္ထုလေး။ ကြိုက်လိုက်တာ အရမ်းပဲ။ ခိုင့်အဖြစ်လေး သာယာလှပပြီး သူချစ်တဲ့လူ နောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာစေချင်လိုက်တာ. သူ့ဘေးမှာထိုင်ဖို့ ခွင့်လာတောင်းတဲ့ လူရွယ်သာ ခိုင့်ဖူးစာဖက်လေးဖြစ်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲနော်။ ကိုလေးကို တမ်းတစိတ်နဲ့ ခံစားနေရရှာမယ့် ခိုင့်ခံစားချက်လေး သက်သာလိုသက်သာငြားပေါ့။ ကဗျာလေးရော။၀တ္ထုလေးရော အရမ်းကို ကြိုက်သွားပါတယ်
ဖတ်ကြည့်ပြီးသွာပြီ ကောင်းပါတယ်၊ အားပေးလျက်။
စာရေးသူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကို ပြထားသလိုပါပဲ အတော်လေးလှပါတယ်.......
ကဗျာလေးကိုလည်း အတွေးလှလှလေးနဲ့ ဖန်ဆင်းထားတာ မို့ ဖတ်ပြီး အတော်လေးကြည်နူးမိတယ်..
သံလွင်အိပ်မက်မှာ အပြေးသွားဖတ်လိုက်တယ် အစ်မ။ “ကိုလေး” ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ ခိုင်နဲ့မြိုင်တော့ မသိဘူး... ဖတ်ရတဲ့သူမှာ ရင်တွေနာလို့...။ အရမ်းကောင်းတာပဲလို့ အထူးမပြောတော့ပါဘူးး)
မရေ...စာလေးအရမ်းလှတယ်။ တော်တော်နဲ့မေ့ရမှာတောင် မဟုတ်တော့ဘူး။
ပန်ပန်ရေးတဲ့ "မြိုင်တို့ အကြောင်း" ကတော့ ပိုင်ပါပေသရှင်...
...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လရောင်အောက်မှာ အားလုံးလှသည်။ ...
"ကစားလုံးများ"ကတော့ ပြောမနေနဲ့ ကန်ထုတ်လိုက်၊ တော့ယူလိုက်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ လုံးချာလည်လိုက်နေတဲ့ ဟာတွေပေါ့...
ပုံရိပ်ရေ .. မြင်အောင်ကြည့်သွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
မမေ.. ဟုတ်ပါတယ်.. ခေါင်းစဉ်က တမင်ပေးခဲ့တာပါ။
ကိုမင်းသုခရေ.. လွတ်လပ်စွာ သုံးသပ်သွားလို့ ရပါတယ်။ အသံမဲ့တေးတစ်ပုဒ်ကို နှစ်သက်တဲ့အတွက်လည်း ၀မ်းသာပါတယ်။
မကေ… မကေ မြင် သိ ခံစားသွားတာတွေက ပြောချင်တာထဲက တချို့နဲ့ ကိုက်ညီနေပါတယ်။ .. တိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုတော့ တိုက်ဆိုင်မှုလို သဘောထားနော့..။
မအိန္ဒြာ ဖတ်သွားတာလည်း သိပ်လှပါတယ်..လို့
ကြည်ဖြူပိုင်. ကိုအောင်.. ညနေဥာဏ်.. ကိုဆောင်း.. အတူခံစားသွားလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
ဝတ္ထုလေးက ချစ်စရာ ချိုချိုလေး...။
ကိုယ်ကတော့ ခိုင်နဲ့ မြိုင်တို့ရဲ့ အကြောင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ စိတ်အတွေးတွေထက် ကိုလေး ကိုပဲ ပိုပြီး ထူးထူးခြားခြား စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တယ်...။
ဒါပေမယ့် လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲက အတွေးတွေရယ် သူတို့ရဲ့ မျက်နှာပေါ်က အရိပ်အကဲတွေရယ်၊ သူတို့ရဲ့ စကားလုံးတွေရယ်ကို ချတွက်စရာ Formula မှ မရှိတာလေ.. နော်...။ ဒီလိုနဲ့ မှန်းဆလို့ မရတဲ့ အရာတွေကို ကြိုးစား မှန်းဆရင်း အချိန်တွေ ကုန်နေခဲ့တာ ကြာလှပေါ့...